Mmetụta nke agha azụmaahịa na textiles
Na-echebara echiche banyere ọganihu na-adịbeghị anya na agha azụmahịa nke Sino-US, site na ọnọdụ dị ugbu a, textiles adịghị etinye aka. Site na nkesa ngwa ngwa mba China na-eme ngwa ngwa, ezigara ụlọ ọrụ ahụ na mba ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia dịka Vietnam na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụrụgodị na…
Etu esi eme egwuregwu tebụl na ọkọlọtọ table
Site n'echiche nke ịdị adị, enwere ike ịsị na table table dị irè karịa ọkọlọtọ Tebụl, n'ihi na tablecloth n'onwe ya kwesịrị ikpuchi desktọpụ dum iji gbochie stains na desktọpụ, ya mere tebụl onwe ya ruru unyi nke ukwuu, na-ehicha Eeh kwa ụbọchị, yana tebụl. ọkọlọtọ ji achọ…
Etu esi ehicha akwa akwa na akwa linen
Ọ bụrụ n’inwere akwa tebụl na akwa nhicha linen, a ga-ejikwa ha na ndụ gị kwa ụbọchị, ọ bụghị naanị maka oge pụrụ iche, ihicha oge mgbe niile bụ ihe ịchọrọ. Ọ bụ ezie na nke a abụghị ọrụ ụlọ siri ike, enwere ụfọdụ nlekọta pụrụ iche mgbe ị na-ehicha akwa ụlọ na akwa nhicha linen ka ọ wee dịrị ...
Leta tebụl dị ọcha Lekọta obere aghụghọ
Ka anyị chee ya ihu, ịkwadebe nri abalị bụ nnukwu ọrụ, mana ịkwadebe ọtụtụ oge na mbọ iji kwado ya. Otu n'ime ihe dị oke egwu ma na-egbu mgbu bụ iwere tebụl dị elu na ọtụtụ akwa nhicha mkpa maka nri abalị. Ọ bụrụ na ị na-enwe ihe mgbu nke ukwuu mgbe ị na-akụ ha, ma eleghị anya ironing gị…
Ego ole bụ akwa tebụl omenala?
Akwa tebụl ahaziri iche dị iche iche dịka ndị nrụpụta na ndị ahịa dị iche iche si dị. Manufacturersfọdụ ndị nrụpụta nwere ihe dị iche iche. Enwere akwa akwa, akwa, akwa na-abụghị nke a na-ete, plastik, wdg. Ahịa sitere na mma. Esemokwu dị n’etiti mmadụ abụọ a, ọ dabere ma ị…
Nzuko World Cloth Conference
“Nzukọ Nzukọ thwa Ọhụrụ nke 2018” bụ isiokwu nke “mmeri mmeri na mmepe nke ibu”, na-agbaso ụkpụrụ nke imekọ ihe ọnụ, imekọ ihe na ịkekọrịta, na-elekwasị anya na "emeghe, teknụzụ, ejiji na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ", obughi nani igosiputa uwa maka uwa. Ndị & ...
Tebụl na-ejikọ ọnụ ahịa ọnụahịa
Tebụl na-ekpuchi akwa n'ùkwù, Kedu ego otu mita? Table tebụl na-ejikọ ọnụ ahịa ọnụahịa; ọnụahịa nke akwa akwa nwere ike ọ bụghị naanị ile anya nha nke oke mana ọ dabere na udiri akwa ahụ n'ihi na ọnụ ahịa akwa dị iche iche abụghị otu. Tebụl owu akwa n'ùkwù n'ahịa bụ ezigbo ihe ...
Ebee ka okporo ụzọ ụlọ ọrụ tex dị na mpaghara ọhụrụ ahụ?
N’oge na-adịbeghị anya, yana mgbanwe nke usoro oriri na nkwalite na-aga n’ihu ime atụmatụ n’obodo, n’agbanwe mgbanwe n’ụdị mmepe akụ na ụba ọhụụ, ahịa ndị China na akwa uwe ndị ahịa na-eguzo n’oge mgbanwe akụkọ ihe mere eme. Tụnyere ch…
Gịnị bụ ihe ndị e ji achọ tebụl?
Ihe ndoro-ndoro tebụl (1) PVC tebụl PVC Nke mbu, iwebata udiri ihe owuwu PVC nke a na-ahụkarị. Uwe okpokoro PVC nwere akwa edo bụ ugbu a ka mma table table. Uru ya dị nro, dị mfe nro, agba dị iche iche, usoro dị iche iche ma dịkwa mfe dakọtara. Na tebụl PVC ihe ndị a…
Mpempe akwụkwọ ọkọlọtọ elu-ọgwụgwụ nhazi
Anyị, Shijiazhuang Kingsun Fabric Imp. & Exp.Co., Ltd, anọwo na-arụ ọrụ tebụl ruo ọtụtụ afọ. E nwere ọtụtụ ụdị table table dị n’ụlọ ọrụ anyị: Akwụkwọ mbadamba uwe, Jacquard tablecloth, Plain e tinyere tebụl e ji esiji ákwà na ihe ndị ọzọ. Ndị a bụ ụfọdụ akara ngosi ọkọlọtọ tebụl ọhụrụ - ...